Translate Ukrainian to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate Ukrainian to Myanmar (Burmese), Ukrainian to Myanmar (Burmese) translations, Ukrainian to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
Привіт як ти မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
Чи є хто? မည်သူမဆိုရှိပါသလား?
Я дуже люблю вас ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
Скільки коштує цей гамбургер? ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ,
Чи можете ви назвати мене таксі? သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား?
Я зацікавлений ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို
Мій рейс був затриманий အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ
Я тут для бізнесу ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို
Привіт! Мене звати မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
Мені шкода, але я одружений ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
Я хотів би запитати вас ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်
Ви можете взяти мене до аеропорту? သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား?
Яке зараз час, будь ласка ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
Де знаходиться найближча міліція? အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ?
Чи можу я запозичити ваш зарядний пристрій, будь ласка? ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
Можеш допомогти мені? ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
Замовте мені випити, будь ласка? ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
Скільки це коштує? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?
У мене алергія на глютен ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
Зателефонуйте до лікаря ဆရာဝန်ခေါ်ပါ
Чи є лікар? ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော
Чи можу я зателефонувати? ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား?
Зателефонуйте мені, будь ласка, до свого начальника. ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။
Це місце дуже приємно ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
Візьми мене в готель, будь ласка ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ
Що таке номер мого номера? အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ?